Fanamarihana Lenovo A6: tafaporitsaka ny famolavolana sy ny fanombohana voalohany | Androidsis
Sivanina ny famolavolana sy ny masontsivana an'ny Lenovo A6 Note
Eder Ferreño | | Lenovo, Finday
Handao antsika i Lenovo amin'ity herinandro ity miaraka amin'ny maodely marobe ho an'ny tsenan'i India. Ny iray amin'izy ireo dia ny K10 Note, izay nanambarana ny datin'ny fametrahana azy vao tsy ela akory izay. Ny maodely iray hafa amin'ity hetsika ity dia ny Lenovo A6 Note, izay efa ananantsika angona ampy. Satria ny endriny sy ny ampahany lehibe amin'ny famaritana azy dia efa fantatra.
Ny famolavolana ny Lenovo A6 Note dia naseho vao haingana noho ny filohan'ny orinasa tenany. ankehitriny ny sasany amin'ireo famaritana azy dia tafaporitsaka misaotra ireo afisy doka an-telefaona isan-karazany. Ka mbola misy tsy ampoizina vitsivitsy ho antsika sahady, mialoha ny fampisehoana azy amin'ny alakamisy ity.
Ny Lenovo A6 Note dia hanana efijery 6,09-inch ny habeny, miaraka amina mari-pana miendrika rano mitete iray ao. Ny processeur an-telefaona dia i Helio P22, izay hiaraka amin'ny bateria mahazaka 4.000 mAh, araka ny fantatra. Izy io dia ho iray amin'ireo singa miavaka indrindra amin'ity maodelin'ny marika sinoa ity.
Ao aoriana dia misy sensor roa sosona 13 + 2 MP miandry antsika, araka ny nasehoan'ilay marika. Raha eo alohany dia hisy sensor 5 MP hampiasaina, izay misy ihany koa ny fanohanana ny famohana ny tarehy. Manana sensor momba ny dian-tànana koa izahay, izay hita ao ambadiky ny telefaona.
Amin'izao fotoana izao dia izay rehetra fantatsika momba an'io Lenovo A6 Note. Farafaharatsiny azontsika jerena fa maodely iray izay hahavita tsara, anelanelan'ny elanelana ambany sy antonony. Ka raha vidiana mafy ianao, izay mety ho izy, dia mety hanana vintana tsara hivarotra tsara.
Amin'ny 5 septambra ho avy izao dia haseho amin'ny fomba ofisialy, miaraka amin'ny maodely roa hafa. Amin'izao fotoana izao, ny fanombohana an'ity Lenovo A6 Note any India ity ihany no voamarina. Tsy fantatsika raha hanana fisian'izany amin'ny tsena hafa na tsia. Na dia natomboka tamin'ny tsena hafa aza ny telefaona marika, dia azo inoana izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Lenovo » Sivanina ny famolavolana sy ny masontsivana an'ny Lenovo A6 Note
TCL hamoaka ny telefaona marika voalohany amin'ny IFA 2019
Honor Play vaovao mety efa mandeha